Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fisamborana fo: Manatsara ny tahan'ny fahavelomana
Any Singapour, 1 amin'ny marary aretim-po 3 no mety ho voan'ny aretim-po miverimberina. Na dia ny fanarenana ny fo aza no fototry ny fisorohana faharoa, ny 6% hatramin'ny 15% amin'ireo marary mendrika amin'izao fotoana izao dia manatrika fandaharanasa fanarenana ny fo.
Ny Philips Foundation sy ny masoivohon'ny tolotra sosialy Singapore Heart Foundation (SHF) dia nanambara ny fiaraha-miasa mba hanatsarana ny vokatry ny aretim-po eo amin'ny fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fidirana amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana. Ny fandaharan'asa mandritra ny taona hamatsiana ny antsoina hoe “SHF – Philips Foundation Heart Wellness Center” dia mikendry ny hampihenana ny taham-pahafatesan'ny aretim-po amin'ny 50% farafahakeliny (raha ampitahaina amin'ireo marary tsy mandray anjara) ary hampihena ny loza mety hitrangan'ny hopitaly. famerenana indray amin'ny 25%.
Ny Fondation SHF – Fondation Heart Wellness Center, izay ny fandaharan'asa fanarenana sy ny fampandehanana azy dia hovatsian'ny Philips Foundation famatsiam-bola amin'ny taona ho avy, hamaha ity olana ity ary hitondra fandraisana anjara bebe kokoa amin'ny fandaharan'asa fanarenana amin'ny alàlan'ny fahafahana miditra ao am-pon'ny vondrom-piarahamonina.
Ny SHF – Fondation Philips Fondation Heart Wellness Center dia iray amin'ireo ivon-toerana telo tantanan'ny SHF izay manome tolotr'asa fanarenana ny fo. Ao amin'ny Fortune Center (190 Middle Road), ny SHF - Philips Foundation Heart Wellness Center dia mety ho an'ny marary aretim-po sy olona atahorana hidirana amin'ny fitaovana fikarakarana ilaina sy ny matihanina amin'ny fahasalamana mba hihazonana ny fahasalaman'ny fony. Ao amin'ny foibe, ny tsirairay dia handalo ny Fandaharan'asan'ny Heart Wellness, programa fanarenana ny fo ao amin'ny dingana faha-3 sy faha-4, izay ahafahan'ireo matihanina amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana isan-karazany ao amin'ny SHF hanome tari-dalana amin'ny kilasy fanazaran-tena mifanaraka amin'izany, torohevitra momba ny sakafo, ary fanabeazana momba ny fahazarana ara-pahasalamana maharitra mandritra ny androm-piainana - ny rehetra. izay tena ilaina mba hahazoana vokatra tsara indrindra amin'ny marary. Ny SHF dia manohana olona manodidina ny 2,500 eo amin'ny foibeny telo, ka ny 675 dia ao amin'ny Fortune Center.
Ny fanomezana programa fanarenana fo azo idirana ao amin'ny Fortune Center dia manan-danja indrindra amin'ny fanatsarana ny fidirana amin'ny fikarakarana ireo zokiolona demografika, izay matetika tsy dia mihetsika loatra ary mora voan'ny aretim-po faharoa. Ny famatsiam-bola avy amin'ny Philips Foundation dia hanampy amin'ny fitazonana ny saram-panarenana fo ho ambany ho an'ny mpikambana mba hampihenana ny sasany amin'ireo sakana ankehitriny izay mametra ny fidirana amin'ny fikarakarana sy manampy azy ireo hanaraka ny fandaharan'asa fanarenana.
Lafiny manan-danja amin'ity fiaraha-miasa ity ihany koa ny fanabeazana sy ny fametrahana fahatokisana amin'ny asa. Ny Lancet Public Health dia nahita fa ny andiana fitsabahan'ny fahasalamam-bahoaka any Singapore dia nampitombo ny mety hisian'ny fanafoanana cardiopulmonary (CPR) ataon'ny olona eo an-toerana mandritra ny fisamborana cardiac ivelan'ny hopitaly (OHCA) efa ho avo valo heny, ary avo roa heny ny taham-pahavelomana, ary manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fitsaboana. fandraisana andraikitra toy izany hanatsarana ny vokatra OHCA.
Ity fiaraha-miasa ity koa dia hahita toerana 20 any Singapore misy fitaovana defibrillator ivelany mandeha ho azy (Philips HeartStart AEDs) ary olona 500 voaofana amin'ny CPR + AED nandritra ny herintaona mba hananganana vondrom-piarahamonina vonona sy matanjaka izay manana fitaovana tsara kokoa hiatrehana ny trangan'ny aretim-po.